अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आगामी निर्वाचनमा पनि ५ दलीय गठबन्धन कायम रहने जिकिर गरे - सिधा दृष्टी
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी निर्वाचनमा पनि ५ दलीय गठबन्धन कायम रहने जिकिर गरेका छन् ।प्रेस सेन्टर कैलालीद्वारा बुधबार धनगढी एयरपोर्टमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले गठबन्धनलाई अझ सुदृढ बनाएर जाने बताएका हुन् ।उनले भने, ‘निर्वाचनसम्बन्धी बहस चलिरहेको छ । ३ वटै निर्वाचन एकैपटक गर्ने एउटा तर्क छ । संघीय,
प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक गर्‍यो भने राज्यको अर्बौं खर्च वचत पनि हुन्छ । जनतालाई पनि पटक–पटक चुनाव भनेर झञ्झट दिनुभन्दा एकैपटक गर्दा सजिलो हुन्छ ।’
उनले संविधानविद्, कानूनविद् र निर्वाचन आयोगसँग पनि पर्याप्त अन्तरक्रिया गरेपछि एउटा निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुन्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आफूबीच समझदारी भएको बताए ।उनले ५ दलीय गठबन्धनलाई आउँदो चुनावसम्म सँगै लैजान बाटो क्लियर भएको पनि दाबी गरे । आउने राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र उपचुनावमा पनि सँगै जान नीतिगत र व्यवहारिक निर्णय नै भएको अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेसले त गठबन्धन आवश्यक छैन भनिरहेको छ नि ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘कोही कोहीलाई के लाग्छ भने महाधिवेशन आएको छ । कसैलाई गठबन्धन बनाएर गयौं भने भोट धेरै आउँछ भन्ने लाग्या छ । कोहीलाई गठबन्धनको विरोध गर्‍यौं भने भोट धेरै आउँछ भन्ने लागेर भन्या हो । भित्र सबैको एउटै छ, गठबन्धन त चाहिन्छ भनेर । त्यस्तो पनि हुन्छ र भन्या, यो गठबन्धनले गर्दा मज्जाले प्रधानमन्त्री, मन्त्री पाइया छ । सरकार चलाउन पाइया छ । अनि गठबन्धन चाहिन्न भनेर हुन्छ ? कहीँ कतै मिल्ने कुरै होइन नि !’
नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घले पेट्रोलियम पदार्थको भएको म�